समुद्री किनारमा स्मिता थापाको मदिरा ! - Everest Dainik - News from Nepal
समुद्री किनारमा स्मिता थापाको मदिरा !
काठमाडौंः रंगमञ्चको दुनियाँमा स्मिता थापा बहुचर्चित नाम हो । साहित्यकार राजेन्द्र थापाले त उनको बारेमा ‘खेलौना’ नामको उपन्यास नै लेखे । यौनलाई सहजरुपमा लिँदै पुरुषलाई आफनो खेलौना बनाउने बताउने गरेकी उनको फेसबुक पेज पनि रंगिन र कामुक देखिन्छ । आफूले विभिन्न भावभँगी र पोजमा खिचेका तस्बिर उनले त्यहाँ पोष्ट गरेकी छिन् ।
पछिल्लो समय पोष्ट गरेका अधिकाश तस्बिर समुद्रको किनारमा मदिरा सेवन गरिरहेका छन् । आफूलाई मदिरासँगै वाइल्ड भएर यौन आनन्द लिन मन पर्ने उनले बताउने गरेकी छिन् । यौनका विषयमा खुलेर बोल्ने भएकै कारण पनि उनी चर्चामा छाउँछिन् ।
ट्याग्स: Smith Thapa